ShweMinThar: "စွမ်းအင်ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ကိုင်စေချင်သည်"
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် သို့တိုင်ကြားခံရမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် ၀န်ကြီးဌာန ၁၄ ခု တွင် ဌာနတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (CPU) များဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည် ။ ထိုသို့အတိုင်ခံရမှုအများဆုံး ၀န်ကြီးဌာနထဲတွင်လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလည်းပါသည်ဟုသိရသည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော့်ထံသို့ရောက်နေသော စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းတယောက်၏ ရင်ဖွင့်စာကိုသတိရမိသည် ။ ထိုစာကို သမ္မတကြီးလည်းဖတ်မိစေချင်၏၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ကြီး လည်းဖတ်မိစေချင်ပါ၏ ။အသေးစိတ် ဓာတ်ပုံအထောက်အထားများလည်း များစွာပါသေး၏။ အချို့လူများ ၏ နာမည်အသေးစိတ် ၊ ရာထူးအသေးစိတ် ၊ ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုချန်လှပ်၍ သူမ၏စာကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည် ။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်အချို့ကိုတော့ စကားချပ်အဖြစ်ကွင်းစကွင်းပိတ်ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်ရပေသည် ။
“ဆရာရှင့် MPPE ဆီဆိုင်တွေက ၁၉၉၀ ကျော်က ၂၀၁၀ အနှစ်၂၀လောက် ခေတ်ကောင်းခဲ့ပါတယ် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အစိုးရပိုင်ဆီဆိုင် ၂၆၄ ဆိုင်ရှိပါတယ် အဲဒိအချိန်က ဝန်ကြီးက ဦးခင်မောင်သိန်း အပြောင်း ဦးလွန်းသီ ဖြစ်ခါစ ဒုဝန်ကြီးက ဦးသိန်းအောင် တို့ပါ ။မကွေးတိုင်းမှာ ဆီဆိုင် ၁၆ဆိုင်ရှိ ရေနံတိုင်းရုံးတရုံးထဲရှိ တိုင်းမှူးတိုင်းရေနံရောင်းဝယ်ရေး အရာရှိ (DMO) ကအုပ်ချုပ် တိုင်းရုံးကပဲ ကားဆိုင်ကယ် ဆီစာအုပ်လုပ်ပေး ဆီဆိုင်တွေကို A,B,C အဆင့်၃ မျိုးခွဲထားပြီး A အဆင့်ဆို လက်နှစ်ဖက် ၁၀သိန်း Bဆို လက်တဖက်ပဲ တလထဲနဲ့အရင်း ကြေပါတယ် ။မကွေး ပဲခူး နယ်ဆိုင် တနှစ်စာက ရန်ကုန် မန္တလေး တလစာလောက်နဲ့ ညီပါတယ်. . တိုင်းရုံးက ဆီစာအုပ်ဖိုးပိုတောင်း တဲ့ခွင်ရှိ ဆီဆိုင်ကို ဆိုင်မန်နေဂျာလက်ထောက်ဆိုင်မန်နေဂျာနဲ့ ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်း ပေါင်း အများဆုံး ၁၀ယောက်မှ အနဲဆုံး ၅ ယောက်ရှိ ပြင်ပက ဆီဖြည့်ဖို့နဲ့ စားရင်းဇယား လုပ်ဖို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမျိုးတော် သူတွေခေါ်ခိုင်းပါတယ် ၁၀ဂါလံရောင်း ၁ဂါလံ ကျန်ပါတယ် ဆီတွေ သိုလှောင်တဲ့ သံကန်တွေကလဲ ပူပူအေးအေး ဆီသားတက်ပါတယ် ညနေဆီတိုင်း ထုတ်တဲ့ဆီစာရင်းနဲ့ သံကန်လက်ကျန်ဆီစာရင်းနဲ့ ဆီတိုင်းပြီး ပိုတာအကုန်ရောင်း ဆီပွဲစားတွေကလဲ တန်းစီ ဈေးပို ပေးတဲ့သူရောင်းတာပဲ တိုင်းရုံး စားရေးဘဝက ဆီထုတ်ဈေးက ဓါတ်ဆီ၁၆၀/ ဒီဇယ်၁၈၀/ အပြင်ဈေး ၅၀၀ နောက် ထုတ်ဈေးက ၁၅၀၀/ အပြင်ဈေး ၃၀၀၀/ တရုတ်ဆိုင်ကယ်ဝင်လာ ဆီဈေးကောင်းလာ ရောင်းအားလဲ ကောင်းလာပါတယ် ထုတ်ဈေး၂၅၀၀/ အပြင်ဈေး ၄၀၀၀-၅၀၀၀ရှိပါတယ် ဆီအများဆုံးရောင်းရတဲ့ဆိုင် ခွဲတမ်း အများဆုံးရတာပါပဲ ဆီမထုတ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်စားရင်းကို အထုတ်ပြ ရောင်းဈေးစိုက်သွင်းပြီး အပြင်ရောင်းစား တာပါပဲ ဆီဆိုင်ဝန်ထမ်းကားစီတော့ ကားသမားတွေက အလကားစီး ထမင်းပါကြွေး ဆရာမတွေ ကားတားစီရင် မတင်ချင်ဘူး ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်းတွေ ၄တန်းတောင် မအောင်တဲ့သူတွေတောင်ပါပါတယ်။
ပညာတတ်တွေ ဘေးရောက်တဲ့ ခေတ်ပေါ့ဆရာ ၂၀၀၆ / ၂၀၀၇ လောက်က ရန်ကုန်ဆီဆိုင်မှာ ဆိုင်မန်နေဂျာကတနေ့စာအရောင်း မနက်ပိုင်းငွေကိုဘဏ်သွင်းဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းရုံးကိုပို့ နေ့လည်နဲ့ ညနေရောင်းရငွေကို တိုင်းရုံးအပ်ရ မန်နေဂျာတယောက်က သောကြာနေ့ညနေရောင်းရငွေ စနေတနင်္ဂနွေ ရောင်းရငွေနဲ့ တနင်္လာ မနက်ပိုင်း ရောင်းရငွေ ( FECနဲ့ပါ ရောင်းနေ) သိန်းထောင်ကျော် တိုင်းရုံးကိုမီးခံ သေတ္တာနဲ့အပ်ရတာ မီးခံသေတ္တာထဲ ဘောက်ချတွေပဲထည့်ပြီး ပိုက်ဆံ့ကို လစ်ပြေးဘူးတယ် ဘယ်သူမှ မတိုင်ရဲဘူး DMO နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ပေါင်းလျော်ဖူးတယ် ။ဆီအသုံးပြ ဆီရောင်း အစားထိုး လျော်ကြတာပါ အဲဒါက ရန်ကုန်mppe တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ရန်ကုန်ဆိုင်က မန်နေဂျာတယောက်ရဲ့ မယားကြီး မယားငယ် အတိုင်းအတော ဇာတ်လမ်း လျှပ်တပြတ်ဂျာနယ်မှာ ဦးမြတ်ခိုင်ရေးဘူးတယ် သူတို့ အသိဆုံးပဲ ဆရာ. .
ရန်ကုန် မန္တလေး ဆီဆိုင်တွေ Aအဆင့်ဆို ကားနဲ့စိန်မှ ရတာ တလအတွင်းကြေပါတယ် ဆီဆိုင် တဆိုင် တလရောင်းအားဟာ ကျွန်မ တာဝန်ကျခဲ့ဘူးတဲ့ ---- ဆီဆိုင်ဟာ နယ်မှာရောင်းအား အနဲဆုံးပဲ အဲဒိဆီဆိုင်မှာ ဝန်ထမ်း ၅ယောက်ပဲရှိ ဓါတ်ဆီ ဂါလံ၅၀၀၀ နဲ့ ဒီဇယ်ဂါလံ ၃၀၀၀ ရောင်းရပါတယ် အပြင်ရောင်းစား ရတာ ။တလကို ဓါတ်ဆီ ၅၀၀ဂါလံနဲ့ ဒီဇယ် ၃၀၀ဂါလံ ထုတ်ရောင်းစားရ မန်နေဂျာနဲ့ ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်း ခွဲယူရ ၃း၂း၁ အချိုး မန်နေဂျာ၃ သိန်း လက်ထောက်မန်နေဂျာ၂ သိန်း ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်းက ၁ သိန်းခွဲယူရ ရန်ကုန်ဆိုင်၂၄ နာရီဆိုင်တွေဆို ဂါလံသောင်းကျော်ပဲ အဲဒါပါ ဆရာ ဆီဆိုင်၂၆၀ကျော်ကို တလ ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် ဂါလံ၅၀၀ နဲ့ ၁၅နှစ်ဆို မနဲဘူး ဆီဂါလံတွေ ဆီသယ်ဘောက်ဆာ ကားတွေ ဓနိတောဆီ ပဌနဂိုလ်ဌာန ပဌနဂိုလ် မန္တလေးပင်မ ဆီဖြန့်ဖြူးရေးဌာနကြီးတွေ ခိုးတာတွေ မပါ သေးဘူး ဆရာ ။ဒါ mppe တခုထဲရှိသေးတာ moge နဲ့ mpe စက်ရုံတွေလဲ ပွဲတော်တွေ့ခဲ့ ကြပါတယ် သန်လျ င်နဲ့ သံပုရာကန် စက်ရုံတွေက အဆိုးဆုံးပါပဲ ကျွန်တော်က မြစ်သာဆည်နဲ့ ပခုက္ကူ ညောင်ဦး တံတားဆိုက်လဲ ဆီကြီးကြပ်ရေး တာဝန်ကျ လို့ ခွဲတမ်းယူခဲ့ဘူးပါတယ် ဒီတိုင့်းပြည် မမွဲပဲ နေပါ့မလားဆရာ ခု အမြင်မှန် ရတော့မှ လစာယူနေရတောင် ရှက်လာပါတယ် ဆရာ။
စွမ်းအင်ကို အဓိကဖျက်စီးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ……… ပါပဲ ။1995/96 လောက်က သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ကားကလဲ အကောင်းစားနဲ့ ရှိမှာပေါ့ ဆရာ ပုဂံ ညောင်ဦးကအပြန် ဂွေးချို ဆီဆိုင်မှာ ဆီထည့်တာ ဆီမသန့်လို့ ရေနံချောင်းမှာ ဆီတိုင်ကီဖေါက်ချ ဆီသန့်ရှာခဲ့ရတယ်လို့ ဂေါက်ရိုက် အတူရိုက်ရင်းပြောတာ စိတ်ဆိုးပြီး ဂွေးချို တဆိုင်လုံးက ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ ချောက်ရေနံကဆီပို့တဲ့ ဆီသယ် ဘောက်ဆာကားသမားကို စစ်ဆေး ပြီး အကုန်ဖြု တ်ပြစ်ခဲ့ဘူးတယ်. . နောက်တခုက 1999/2000 လောက်က သံပရာကန်ရေနံချ က် စက်ရုံမှာ စက်ရုံမှူးနဲ့ ဆီချက်တဲ့ ကုန်ထုတ်ဝန်ထမ်း၁၀ ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး mogeက ရေနံစိမ်းကို အစိုးရငွေနဲ့ဝယ်တာ တဝက်ပဲ အဝယ်ပြ အချက်ပြပြီး ကျန်တဲ့ တဝက်က ချက်လို့ရတဲ့ဆီကို အကုန် အပြင်ရောင်းစားခဲ့ကြတယ် နောက်အဝေမတဲ့လို့ ၁၀ယောက် အတွင်းသိထဲက တယောက်တိုင်လို့ တိုင်သူရော အတိုင်ခံရသူပါ ၁၀ ယောက်လုံး ထောင်၁၀ နှစ်ကျ တဲ့ အဖြစ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်. . အဲဒိနောက် တော့ ၀န်ကြီး------က သူ့တပည့်--------တွေကို ဝေစား မျှ စားလို့ရအောင် အထူးအရာရှိ ဆိုတဲ့ ရာထူးထွင် ခန့်ထားပြီး mpe, moge, mppe ဆီဆိုင် စက်ရုံ ဌာနတွေကို အချိန်မရွေး ဝင်စစ်ခွင့်ပြု ပေါင်းစားစေပြီး တရုတ်ရေနံ ပိုက်လိုင်း စစ်ဆေး ကြီးကြပ်ရေးအနေနဲ့ ဒေါ်လာပါ စားစေခဲ့ပါတယ်. . ၂သီး . .၃သီး စားတွေလို့ ခေါ်တာပေါ့ ဆရာ။
အဆိုးဆုံးက ရေနံစိမ်း ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခ, တရုတ်ရေနံပိုက်လိုင်းမှာ ရတဲ့ဒေါ်လာ တဒေါ်လာကို ပြင်ပပေါက်ဈေး၇၀၀ နဲ့ ရောင်းစားပြီး နိုင်ငံတော်သွင်းတော့ တဒေါ်လာ ၆ကျ ပ် နှုန်းနဲ့ပဲသွင်းခဲ့ တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် စစ်အစိုးရခေတ်မို့ ဘာမှအရေးယူတာတွေဘာတွေမကြား၇ပါဘူး။ . ဆရာနဲ့ တပည့်ပေါင်းပြီး ၂၀၁၀ ဆီဆိုင်တွေ ကုပ္မဏီလွှဲတဲ့ အချိန်မှာ အကျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆီဆိုင်တွေကို ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် လွန်စွာမှနဲပါး တဲ့အောက်ဈေးနဲ့ ကုပ္မဏီတွေကို ရောင်းစားခဲ့တာပါ နိုင်ငံတော်မှများ စွာနစ်နာဆုံရှူံးခဲ့ရပါတယ်. . . ဝန်ကြီးရဲ့ သားတော်သမီးတော်တွေ ဆီဆိုင်တွေ ရခဲ့ပါတယ်. . . ပြောစရာတွေ ကျ န်ပါသေးတယ်. . သည်းခံဖတ်ပေးပါဦး ဆရာ ။
ခုလက်ရှိ mppe mpeရော moge မှာပါ တချို့ လုပ်ငန်းတွေ ဝန်ကြီး မသိတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
အရင်ခေတ်တုန်းကဆို ၀န်ကြီးသား--------က ၁၀ဘီး ၁၂ဘီး ဆီသယ်ဘောက်ဆာ ကားတွေ ထောင်ပြီး ရန်ကုန်ဆီဆိုင် တွေကို ဆီပို့စေခဲ့ပါ ဆီလျှော့နေရင်လဲ ဘယ် ဆိုင်မန်နေဂျာမှ မပြောရဲခဲ့ကြပါဘူး ဌာနက ဆီသယ်ယာဉ် ဘောက်ဆာ ကားတွေကို နယ်ဆိုင်ပဲ ပို့ရတော့ရ ပါတယ် ။ဆီဖြည့် ပန့်မန်း မိန်းမတွေနဲ့ ဆိုင်မန်နေဂျာ့ မိန်းမတွေက တိုင်းမှူး၊ dmoတွေရဲ့ မိန်းမကိုဖါး dmo စက်ရုံးမှူးမိန်းမတွေက ညွှန်မှူးဝန်ကြီး ဒုဝန်ကြီး မိန်းမတွေ သား သမီး ဆွေမျိုးတွေ ကိုဖါး ကြနဲ့ အဖါး သံသရာလယ် ခုဆို အဲဒိdmoတွေ စက်ရုံမှူးတွေ ရုံးချုပ်မှာ ညွှန်မှူးတွေ ဖြစ်နေကြပါပြီ ။ဒီမိုးဒီလေ ဒီလိုလူတွေ စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်တာ ဘယ်လိုမှ ကောင်းမလာနိုင်ပါဘူး တခြားဌာနတွေလဲ ဒီလိုပါပဲ ဓါတ်ဆီ ဆိုင်မန်နေဂျာဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေ ဆိုင်ပိတ်တာနဲ့ ktv ပန်းကုံးစွပ် မယားငယ်ယူနဲ့ စစ်ကိုင်းdmo တယောက်aidsနဲ့ သေဘူးတယ် ။တချို့ ဝန်ထမ်းတွေလဲ အလားတူ ပါပဲ ၂၀၁၀ ဆီဆိုင်တွေလဲ ရောင်းလိုက်ရော ဆိုင်ဝန်ထမ်းတချို့ ဆင်းရဲမွဲတေ ဘဝပျ က်ကြနဲ့ အရက်ကြောင့်သေတဲ့သူကသေ . .မစားကောင်းတာ စားခဲ့တော့ ကင်ဆာရောဂါတွေလဲ ဖြစ်ကြနဲ့ တော်တော် သံဝေဂ ယူစရာ ကောင်းပါတယ် ဆရာ. . ကြီးပွါးချမ်းသာနေတဲ့သူလဲ ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဆရာရယ်. . အထင်ကြီးစရာတော့ တကွက်မှမရှိ ။
စက်ရုံတွေမှာ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေကို လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျ င် သင်တန်းတွေ မော်တော်ယာဉ် စက်ပြင်တွေကို သင်တန်းပေးတာတွေ မရှိတာ ကြောင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းရှားပါး လာနေတာပါ ခုစက်ရုံဆို ခါးဆက် ပြတ်နေပြီလို့ ပြောနေကြပါတယ် ။အသစ်ဝင်လာတဲ့ BEဆင်းတွေလဲ ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းပါတယ် ဆရာ တလက်စတည်း စက်ရုံ အကြောင်း ပါပြောပါရစေ စက်ရုံကနေ နေပြည်တော် မန္တလေး မကွေးနဲ့ မင်းဘူး ဓါတ်ငွေ့ဆိုင်၎ဆိုင်ကို ဓါတ်ငွေ့ပ lpg သယ် ဘောက်ဆာယဉ်နဲ့ နေပြည်တော်ဆိုင်ကို
ပို့ပေးရပါတယ် နပတဆိုင်ကို စွမ်းအင်ရုံးချုပ် mpeက ဝန်ထမ်း မန်းဆိုင်ကို ချောက်ရေနံချ က်စက်ရုံ နဲ့ မကွေး မင်းဘူးဆိုင်ကို မင်းဘူး စက်ရုံကဝန်ထမ်းတွေ အလှည့်ကျ စနစ်နဲ့ သွားရပါတယ် ဒါတောင်ရန်ကုန်LPG ၄ဆိုင်ကို ရတနာစုကုပ္မဏီကို၂၀၁၆က လွှဲလိုက်လို့ ရုံးချုပ်ကလူတွေ စားပေါက်ပိတ်ကုန်ကြတယ် မင်းဘူး မကွေးက တလကို တကြိမ် ၁၀ယောက်နဲ့အလှည့်ကျ သွားရ မကွေးဆိုင်က ခွဲတမ်းက စရိတ်ငြိမ်း ၃/ ၄ သိန်း မင်းဘူးက စားစရိတ် မပါ ၂သိန်း နီးပါး ခုလက်ရှိအချိန် ထိလုပ်စားနေကြတုံးပါ မင်းဘူးစက်ရုံကlpgတင်ဒါကို ရုံးချုပ်ကကိုင်ထား တင်ဒါ မအောင်ရင် မင်းလှသံပုရာကန် စက်ရုံကို ယခင်က ပိုက်လိုင်းနဲ့ ပို့ပေးရတယ် မင်းလှနဲ့ မင်းဘူးကြား ဗါးရုံတခုရှိ ဗါးဖွင့်ပိတ်လုပ်ရ ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက် စက်ရုံက ပိုက်လိုင်းကြီးကြပ်တွေ ပိုက်လိုင်း ကျန်lpg ခိုးထုတ်တာနဲ့ အရှုံးများ နေလို့ lpgဘောက်ဆာနဲ့ ပို့ပေးနေ ရတော့ ကားနာ ကားမောင်းဆီကုန် တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍါပဲရှုံးနေတော့ စက်ရုံက ဂျ ပန်အကြွေးမကျေ လို့ ရှုံးရတဲ့ အထဲ အရှုံးပေါ် အရှံးဆင့် နေပါတယ် . . .
လူမှန်နေရာမှန်လဲမရှိ ဆိုင်တာဝန်ကျ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း တွေလဲ ခွဲတမ်းယူနေကြတာ မန်းသံပုရာကန်စက်ရုံက အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေဆို ခြင်းလေးတွေ ချိုင့်တွေထဲ ဆီထည့်သယ်နေကြ သန်လျင်နဲ့ တခြားစက်ရုံက အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေလဲ ပါမှာပါပဲ. . ပြု ပြင်ရေးက စိတ်ဓါတ်ရော အလုပ်ကိုင်ပါ ပြု င်ြဖို့ အတော်ကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ် ။
ဓါတ်ငွေ့ရည်ဆိုင်ကိုလဲ တစ်နှစ်ကျော် တစ်ခါတာဝန်ကျ ။ မခိုး ချင်တော့လို့ပါဆရာ. .
စက်ရုံကနေ မကွေး မင်းဘူး lpg ဆိုင်တွေက ဓါတ်ငွေ့ရည် ထုတ်တဲ့စာအုပ် ဓါတ်ငွေ့ရည်အိုး ကို ပူးတွဲထုတ်ပေးထား စာအုပ် သက်တမ်းတိုးချင်ရင် စက်ရုံမှ တဆင့် ရုံးချုပ်ကို တင်ပြပြီး အတည်ပြု သက်တမ်းတိုးရပါတယ်။မကွေး မင်းဘူးဓါတ်ငွေ့ရည်ဆိုင် တွေမှာ ထုတ်တဲ့အိုးနံပါတ်နဲ့ စာအုပ်ပါ အိုးနံပါတ်တွေ မတူတော့ပါ အိုးဟောင်းတွေ ပျက်စီးကုန်လို့ အပြင်ထိုင်းကထုတ်တဲ့ အိုးတွေနဲ့ ထုတ်နေကြတာလဲ ကြာပါပြီ စာအုပ်တအုပ် တအိုးကို 25 kg ထည့်ပေးရမှာ ဒါပေမယ့် စာအုပ်နဲ့ဆို 22. ပွဲစားအိုးဆို 23.ပဲ ပုံမှန်ထည့်ပေးကြ 25 kg အိုးတအိုးကို မိသားစု ၅ ယောက်ရှိ တဲ့အိမ် အနဲဆုံး ၃လ ၄လ နီးပါး သုံးလို့ရပါတယ် မထုတ်ဖြစ်တဲ့လတွေ နစ်နာမှာကြောက်တဲ့သူတွေက ပွဲစားကို စာအုပ်ရောင်းစားထား ပါတယ် သူလိုမှသာ ပွဲစားဆီက ထုတ်ယူပါတယ် မကွေးမှာ ပွဲစား ၂ယောက် အလှည့်နဲ့ မင်းဘူးက ၁ယောက်ထဲ ပွဲစားနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့သူ ကလဲ ဖဲ အတူရိုက်ပေါင်းစားကြပါ သေးတယ် lpg ဘောက်ဆာသမား နဲ့ log ထည့်ပေးသူ ကုန်ထုတ်အဖွဲ့ နဲ့ ပိုထည့်ပေးရတဲ့ ဈေးကွက် ရှိပါသေးတယ်. .lpg ပွဲစား lpg ထည့်အိုးက 45kg အိုးကြီးနဲ့ ထည့်ပေးရပြီး အကုန်လုံး ရန်ကုန် ကိုပို့ပါတယ် ရန်ကုန်မှာlpg ဈေးကွက် ရှိနေပါတယ် ကုလားတွေလို့ ပြောပါတယ်. . . ဒါအပြင် ဆိုင်မှာ ပိသာနဲ့ လာဝယ် တဲ့သူတွေကိုလဲ အလွတ်ရောင်းစား ကြပါသေးတယ် ရတဲ့ဟာ အသောက်အစား စရိတ်ပေါ့ ဆရာ မော်တော်ယာဉ်ဌာန အကြောင်းလဲ ပြောပါဦးမယ်. . ဆရာ. . .
လစဉ်လဲ စက်ရုံပ ဝန်ထမ်းတွေကို မကွေး ၁၁ဦး မင်းဘူး ၁၁ဦး မငဆိုင်အလှည့်ကျ လွတ်ရတယ်
ရယ်စရာတခုရှိပါတယ် ဆရာ လစဉ် ဆိုင်ချိန်းတိုင်း ဆိုင်တာဝန်ကျ မန်နေဂျာက ပွဲစားဆီကပိုက်ဆံ့ ယူ ဆိုင်ဝန်ထမ်း၁၁ ယောက်စာ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေကို ဝယ် ဆန်ဆီဆား အကြွေးယူ နေ့စဉ် ဈေးဝယ်ထမင်းချ က်လဲ တာဝန်ပေးထားပြီးသားပါ အားလုံးက ဆိုင်မှာပဲအိပ်ရပါတယ် လကုန်ဆိုင်ချိန်းရင် ပွဲစားနဲ့ စားရင်းရှင်း ပိုတာခွဲယူ သူကိုလဲ lpg လိုသလောက် ပေးထားပြီး သား အိုးခွက်ပန်းကန်တွေကို ၁၁ဦး မဲနှိုက် အိမ်သည်တာ လစဉ်ပါပဲ အဲဒီလိုမျိုးတွေ မခိုးချ င်တော့ပါဘူး ဆရာ ရှက်လဲ အတော့်ကို ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်ဆရာ သူခိုးတွေ လစာပေး စက်ရုံကရှုံး ဒီတိုင်းပြည် မွဲနေဦးမှာပါ။ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ဘာမှမသိ အောက်ခြေထိလဲမဆင်း ပြောတာနားထောင်တာလောက်ပါပဲ ။
၂၀၁၆/ ၁၇ တုံး mpe မှာ md မရှိလို့ …………. က mpe နဲ့ mppe ပူးတွဲ md လုပ်ရပါတယ် အဲဒိတုံးကလဲ ဝန်ထမ်းတွေကို လုံးဝ ထည့်မတွက်ပဲ ညောင်တုံး lpg စက်ရုံကို မရှုံးပဲနဲ့ သူနဲ့ အမျိုးတော် တဲ့ ………… ကုပ္မဏီကို လက်သိပ် ထိုး ရောင်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်က lpg ဂက်စ်ဆိုင် ၄ ဆိုင်ပါ ပေးခဲ့တာပါ ။အဲဒိအချိန်က ဝန်ကြီးဖေဇင်ထွန်းပါ ။ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ အတော် ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့တာ မင်းဘူးစက်ရုံကိုလဲ ၁၀ ယောက်လောက် အပို့ခံရတာပါ ။ mpe ရုံးချုပ်ကလူတွေ mppe,md ဦး……..အတော့်ကိုမုန်းကြတယ်။ ရန်ကုန် lpg ဂက်စ်ဆိုင်ကို အလှည့်နဲ့သွားရတဲ့ စားပေါက် ပိတ်သွားခဲ့လို့ပါ . . . ရန်ကုန် cng ဆိုင်တွေက MOGE အောက်ကပါ cngဆိုင်တွေလဲ mogeက ဝန်ထမ်းတွေ အလှည့်ကျ စနစ်နဲ့ ပါပဲ သူတို့ဆိုင်ကလဲ cngကားတွေ စာအုပ်ထုတ်ပေးထား တချို့ cng ကားနံပါတ်နဲ့ cngထုတ်တဲ့စာအုပ် က ကားနံပါတ် စာအုပ်နံပါတ်တွေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရင် အကုန်ပေါ် ပါတယ် ဆရာ. . . ပြောစရာတွေ ကျန်ပါသေးတယ်. . ဆရာ။
မော်တော် ယာဉ်ဌာနဆို ခုမနက် ကားတွေဆီ ထည့် ဆီကို စတိုဌာနကိုင်ပါတယ် ပစ္စည်းထိန်းစတိုဌာနပါ နံမည်ကိုက စတို ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လျှော့တာလဲပါ ကားတွေ ပျက်ရင် ဘီးပေါက်ရင် အပြင်မှာပဲ လုပ်ရတော့ ကားသမား တွေ ပိုက်ဆံ့စိုက်ရတယ် အဲဒါ စာရင်းပြလို့မရတော့ မသွားတဲ့ ခရီး အသွားပြ ဆီပိုထည့်ပေး ဆီရောင်း ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ပြန်ဖါနဲ့ ဆီသံသရာ လည်နေပါတယ် အင်ဂျင်အကြီးစား ပြင်ရင် အပြင်work shop မှာပဲ ပြင်ရတာပါပဲ ပြင်ဆင်စရိတ်များ ပစ္စည်းအဝယ်စရိတ်များ ပိုတင်ပြီး လူကြီးတွေနဲ့ ကားသမား ခွဲယူကြ နောက် မန္တလေး ရန်ကုန်မသွားပဲ ပစ္စည်းအဝယ် အသွားပြ ဆီထုတ် ရောင်းစားနေကြတာပါ လူကြီးတွေ ကလဲ ခရီးသွားရုံးမိန့် moထုတ်ပေး ခရီးစရိတ်ပါ ထုတ်စားလို့ရပါတယ်.. အဲဒါကိုစစ်ရင်တန်းပေါ်ပါတယ်. စက်ရုံဘဏ္ဍါရေးဌာနမှ.သွားတဲ့ခရီးစဉ် တလျှောက် လမ်းကြေး တံတား ကြေး ပေးဆောင်ထားခြင်းတဲ့ငွေ ထုတ်ထားတာ ရှိမရှိ ကြည့်ရင်သိပါ တယ် ။
ကားတွေပုံမှန်ဆွဲရတာက ရုံးချိန်နဲ့ အလှည့်ဆင်းferry ဆွဲ ဈေးကျောင်း ဆေးရုံ ဘဏ် ဆွဲရ ပေမယ့် မကွေး စကုဘက် မသွားပဲ အသွားပြ ဆီထုတ်စားပါသေးတယ် ကားကြီးက ၁၀မိုင် ၁ဂါလံ ကားလေးက ၁၂မိုင်၁ဂါလံနှုန်းပါ ရုံးချိန်ဆင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက မနက် ၈ နာရီတန်းစီပြီး ၉နာရီထိ ကန်တင်းကော်ဖီသောက် ၁၀နာရီခွဲ ၁၁နာရီထိ အလုပ်ပြ ၁၁နာရီကျော် ထမင်းစား နေ့ခင်း အိပ်တဲ့သူအိပ် ဖဲရိုက် အရက်သောက်နဲ့ ညနေ၃ခွဲ အိမ်ပြန် အချိန်တန်တော့ လကုန် လစာလေးထုတ်နဲ့ ဇိမ်ပါပဲ . . တခြားရုံးဝန်ထမ်းတွေဆို မနက် ၁၀နာရီမှ ရုံးတက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ နယ်မြို့ တွေမှာ ရှိပါသေးတယ် ။ . ဆရာ့ကို ခုလို အသိပေးရလို့တော့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်. . တခြားစက်ရုံ အကြောင်းတွေကိုလဲ ပြောပြပါဦးမယ်. . ဆရာ. .
။စက်ရုံက ဘေးပေါက်မရတဲ့ဌာနက ဝန်ထမ်းတချို့ဆို လစာထုတ်အကြွေးဆပ်လိုက် ပြန်ချေးလိုက်နဲ့ တလနဲ့တလ အကြွေးသံသရာလည်တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ် ။အရင်လောက်လဲ ခိုးလို့ မရ ထွက်ငွေကို မထိန်းတတ် ၂လုံး ၃လုံးလဲ ခုချိန်ထိ ထိုးနေကြတုံးပါ စက်ရုံရပ်ထားလို့ ခိုးမရလို့ အဆင်မပြေရင် ရွှေရောင်းကြတာ များတယ် ရေနံလဲထွက် ရွှေလဲထွက်လို့တောင် ပြောစမှတ်တွင် mogeကြတော့ တွင်းတူးဆီရောင်းစားတာကို ဆီထမင်းစားတယ်လို့လဲ ပြောကြ တယ် nld အစိုးရကိုလဲ လုံးဝမှ မထောက်ခံ ။မခိုးရလို့ ၂၀၂၀ အဘ မျှော်တဲ့သူတွေရှိလို့ စက်ရုံတွေ မရပ်အောင် အပေါ်ကထိန်းနေကြ ရှုံးတာကတော့ ၂ခါရှုံးပါပဲ ဆရာ ရပ်ထားတဲ့ စက်ရုံဆို ဝန်ထမ်းလစာ လျှ ပ်စစ်မီတာခ, ကားခွဲတမ်းဆီ ပုံမှန်ကုန်နေတဲ့ အပြင် အငြိမ်းစား ရပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာက ဖယ်မပေးပဲ နေနေတဲ့ အရာရှိအငြိမ်းစားတွေရှိတယ် ။
ဓါတ်မြေသြဇာ စက်ရုံက ယူရီးယား နဲ့ အမိုးနီးယား ထွက်ပါတယ် စလေ ဆိပ်သာ ဆရာတို့ပြည်နားက ကျော်စွာ စက်ရုံတွေရပ်ထားတာ ကြာနေပါပြီ တွက်သာကြည့်ပါတော့ ဆရာ ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးနေလဲလို့ ရပ်ထားတဲ့ စက်ရုံကဝန်ထမ်းတွေကို လည်နေတဲ့စက်ရုံတွေဆီ ၃လ တကြိမ်ပို့ပေးတယ် အသွားပြန်ဆီ ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ် နောက် စက်ရုံတွေက အရာရှိတွေ ကို နိုင်ငံတော်စားရိတ်နဲ့ ဂျပန်ကို ၃ပါတ်လောက်ပို့ပေးသေးတယ် အလှည့်ကျ နဲ့ပဲ ဘာမမထူးပါဘူး ။အမေစု နဲ့ သမ္မတကြီးပါ သိစေချ င်လို့ပါ ဦးဝင်းခိုင် ပါ သူ့အနားကလူတွေ အကြောင်း သိစေချ င်ပါတယ် ဆရာ ။ အမေစု လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး လုပ်မယ်ဆိုတုံးက အားရှိခဲ့တယ် မလုပ်ဖြစ်တော့ သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရသွားကြတာပါ . . . ဆရာ .
ကားတွေရဲ့ တာယာ ဘတ္ထရီ ဆိုရင်လဲ ရုံးချုပ်ကကိုင်ထား လိုအပ်စာရင်းတင်လို့ ရပြီဆိရင် သန်လျင်စက်ရုံက စတိုသွားထုတ် ရတယ် အဲဒိ ကုပ္မဏီတွေနဲ့ အပေါ် ကလူတွေနဲ့ ပေါင်းစားထား စာချုပ် ထားသလားပဲ လိုချင်သလို ဘဏ္ဍါရေးက ငွေထုတ်ဝယ်မရဘူး ငွေချပေးရင် ရရဲ့သား တာယာပဲပေး တော့ တာယာ ဘတ္ထရီဖိုး အပြင် သွားထုတ်ရတဲ့ သယ်ယူစရိတ် ကားခတွေပါ ထပ်ကုန်ရပါတယ် စက်ရုံအကုန်လုံးက သွားထုတ်ရတာပါ ဆရာ ပြောဖို့ ကျန်နေလို့ပါ “
သူမ၏စာကဆက်ရန်များစွာကျန်သေးသည် ။ဤစာကိုဖတ်ပြီးနောက် ၀န်ထမ်းလောက တွင်ခေတ်စားနေသော မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်ဟူသောစကားကို သတိရမိ၏ ။ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြသည်မှာတိုင်းပြည်အတွက်ရင်လေးစရာဖြစ်၏။ NLD အစိုးရအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပဲ ၂၀၂၀ ကျ အဘတွေပြန်လာမှာဟုမျှော်နေသူတွေဝန်ထမ်းလောကမှာ များနေကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ သိရပေ၏ ။ သမ္မတကြီးသည်လည်းကောင်း၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးသည်လည်းကောင်း ဤဖြစ်ရပ်များကို သေသေချာချာကိုင်တွယ်စေချင်ပါသည် ။ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများ ဤကဲ့သို့ဆုံးရှုံးနေခြင်းမဖြစ်သင့်ပါ ။ ယခင် မဆလ ၊ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ အစိုးရလက်ထက် ၊ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွေမှာလို ဌာနတွင်းစုံစမ်းရေး( DI ) ဆိုပြီး သူ့ လူအချင်းချင်းစစ်ဆေးခိုင်းလို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ ထိုအမှုကိစ္စများ ပေါ်ထွက်လာမည်မဟုတ်ပါ ။ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား ၊ ၀န်ကြီးဌာနကြီးတိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှရှိနေပါသည်ဟုသာဝိုင်းဝန်းလိမ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည် ။ငွေယိုပေါက်ဖြစ်နေသောအဆင့်တိုင်းကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးရပါမည် ။ စာရင်းပြပြီးအပြင်မှာ အမှန်တကယ် ရှိမရှိ စာရင်းနှင့်မြေပြင်လက်တွေ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရပါမည် ။ စွမ်းအင်ကို ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်သင့်ပါသည် ။စွမ်းအင်သာမဟုတ် ၊ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနေသော ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးများသည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ညွှန်ချုပ် ညွှန်မှူးများ ၊အောက်ကပြောသမျှကိုသာ ရုံးခန်းထဲမှထိုင်နားထောင်မနေပဲ ကျွမ်းကျင်သူများ ၊ သက်သေအထာက်အာထားများ မရရအောင်ရှာကာ တိုင်းပြည်မျက်နှာ၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူပြည်သားများမျက်နှာကိုသာ ကြည့်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား အလုပ်လုပ်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ။